Roborock's Onyx Dump Station Inoita Zvese Zviri Nyore [Ongorora] | Gadget Nhau
Roborock's Onyx Dump Station inoita kuti zvive nyore [Ongorora]
Miguel Hernandez | 15/07/2021 14:00 | Yakagadziridzwa ku 17/07/2021 13:24 | Home otomatiki, Gadgets, Musha, Reviews
Tichangobva kuongorora pano iyo Roborock S7, robhoti yekutsvaira iyo inodhirawo uye inopa zvirevo zvechokwadi zvinoshamisa. Kusvika pari zvino, iyo yakanakisa kukosha kwemari robhoti vacuum yatakaongorora kuchiteshi. Nekudaro, kumiganhu nekukwana kune diki diki, zviteshi zvekuzvipedzera zviri kuwedzera kudikanwa.
Roborock yakaunza iyo nyowani yekuzvitorera chiteshi uye isu takaiongorora zvakadzama kuti iwe utarise iyi Roborock S7 yekuwedzera. Zivai nesu kuti kugadziriswa kwe robhoti vacu cleaner kwakaderedzwa sei kusvika kushoma uye iwe unogona kutora mukana wenguva yausingatambise kubvisa mudziyo.
Ndicho chikuru Achilles chitsitsinho yerudzi urwu rwezvigadzirwa, nguva yekudurura. Iyo dhipoziti inopa kune icho chainopa, uye kana iwe uine zvipfuwo (sezvazviri nyaya yangu) zvinopa chaizvo kune akati wandei kuchenesa zvakanyanya. Naizvozvo, pese pandinoda kumutsidzira Roborock S7 yangu, ndinofanira kurangarira kana ndadurura tangi rayo kana kwete. Izvi zvino zvazove dambudziko risinganyanyozivikanwa nekuda kwechigadzirwa chatiri kuyedza, chiteshi chega chekuzvibvisa icho Roborock yakashandura kune yayo yepamberi yekutsvaira yekuchenesa uye izvo zvinobva zvave imwe yeakanakisa vabatsiri vayo.
1 Zvishandiso uye dhizaini: Roborock maitiro
2 Marara uye guruva rekuunganidza masystem
3 Nenjere kubatana
4 Nhoroondo yevashandi
Zvishandiso uye dhizaini: Roborock maitiro
Chiteshi cheRoborock S7 chazvinorerutsa, chingava sei neimwe nzira, inouya nemaviri mavara, nhema uye chena, inoenderana neruvara rweyako robhoti yekuchenesa. Iyo ine yakajairwa uye yakati simuki base, nenzira imwecheteyo iyo ine yakapetwa kaviri silinda system inogara dzimba tangi nemota yekutsveta. Kune vamwe vese, doko iri rinoita zvakafanana mabasa seachairesi yekuchaja, ndokuti, inogona kubatanidza robhoti yako kune simba kuti uenderere nekuchaja chishandiso.
Weight: 5,5 makirogiramu
Vipimo: 31.4 x 45.7 x 38.3 cm
Mavara aripo: Dema nechena
Iyo ine inobata tambo kumashure, kuitira kuti iwe ugone kuiisa zvisina kujeka mune chero chinzvimbo, chimwe chinhu chinogamuchirwa. Pazasi ine hukasha hunobatsira chishandiso kukwira nhanho diki, nenzira imwechete iyo inotora mukana wekuchenesa mapini ekuchaja nerudzi rwemabhurashi akaiswa zvine hungwaru nekuda kwechinangwa ichi. Pasina kupokana, isu tinozozvirondedzera zviri nyore kune iyo mhando nekuda kwehukuru hwayo uye dhizaini yayo, saka inowirirana zvakazara zvaunotarisira kubva kune weRoborock S7 shamwari.
Marara uye guruva rekuunganidza masystem
Ichi chikamu chekutanga chakakosha kwazvo, muchokwadi chinoita kwandiri sekukosha uye ndosaka iri nguva yekutaura kwenguva refu nezvazvo. Iwe unotoziva kuti ruzhinji rweaya ma auto-ekurasa masitesheni anoda akateedzana e "mabhegi" ayo anowanzove ane dhizaini dhizaini, uye kana pasina izvozvo hazvibatsiri chinhu. Nekudaro, ichi chiteshi cheRoborock S7 chazvinoregedzera chinokutendera nzira mbiri dzekubvisa uye kuchengetedza tsvina:
Mune hermetic tank kuburikidza necyclonic suction system
Mune «guruva mubati» bhegi
Nenzira, Kunyangwe kana kusashandisa Roborock S7 tangi bhegi sarudzo. Kunyangwe chiri chokwadi kuti bhegi iri rakanyatsogadzirirwa guruva uye rinotibvumidza kuburitsa chiteshi tisina kubvisa tangi, hachisi chinhu chakakosha.
Bhegi reguruva rinokwana 1,8 litita uye inosimbisa zvoga. Isu tinoriisa munzvimbo yepamusoro tichishandisa kadhibhodhi gwaro uye tinotora iro repazasi kana tichiisa chisimbiso. Bhegi iri rine mushonga unorwisa mabhakitiriya kuti rive nechokwadi chenguva yehutsanana
Kunze kweizvi, unogona kusarudza zvakananga dhizaini yedutu (iine gumi nemashanu poindi) nekumhanya kwakasiyana siyana kunokutendera kuburitsa tangi reRoborock S15 zviri nyore. Tine masimba mana zvichienderana neruzha uye mashandisiro esimba atinofungidzira:
Ini ndinokurudzira iyo yakakwira, kunyangwe kana ruzha rukakwira kupfuura zvakajairwa, pano chakakosha ndechekuburitsa robhoti nenzira kwayo, uye ndozvazvinoita. Iri tangi rine firita yakajairwa uye mamwe mafirita maviri anovimbisa chisimbiso chakazara kuitira kuti guruva risatize. Zvinoita pasina kutaura kuti ese mafirita aya anogona kubviswa uye anogona kucheneswa zviri nyore pasi pepombi, kunyangwe bvunzo yedu yanga isati yareba zvakadaro. Kana isu tikasarudza kuburitsa kuburikidza neakawanda-esirinda yekukweva system, isu tichava ne1,5 litre tangi, yakati rebei pane iya yebhegi-rekuteya bhegi.
Iyo tangi inokwana ingangoita vhiki ina
Iko kusanganiswa kweaya ese matekinoroji anoita kuti ive yakasarudzika chishandiso, sezvo pasisina imwe robhoti yekutsvaira auto-kubvisa masisitimu ayo anotendera ese ari maviri bhegi uye yakaenzana tangi kuti ishandiswe mukusiyana. Kune izvi zvese, uye uchifunga izvo zviri pamusoro, yakagamuchira zvitupa zvakasiyana kuTÜV Rheinland maererano nekuvandudzwa kwemamiriro ekurarama kweanorwara neanorwara.
Zvingave sei zvisiri kudaro, chiteshi chega-chega cheRoborock S7 chinobatana neiyo Roborock application mune zvakafanana mazwi seanotsvaira robhoti. Mune dzidziso, zvinotora mukana wealgorithm yakagadzirwa neiyo brand kugadzirisa iyo inodururwa kune izvo zvinodiwa nemashandisi ekuchenesa maitiro, asi ini handina kuona mutsauko wakawandisa. Tinogona kudzora maitiro uye simba rekurasa zvirinyore nechishandiso kubatanidza nemazvo, ichokwadi kuti hatipotse mamwe mashandiro futi.
Sezvakaitika panguva iyoyo neRoborock S7, ruzivo rwekuti chiteshi chitsva chekubvisa auto chandipa chave chakanaka kwazvo. Ini pachangu, ini ndinoda cyclonic kurasa system mutangi kuitira kuti ndidzivise kugadzira ivhu rakawanda nehombodo uye kudzikisira kuchengetedza, zvisinei, zvinoita kuti zvive nyore kubvisa tsvina nekushandisa mabhegi ako akanyatsovharwa.
Robhoti yakatangwa nemutengo uyo dzakakomberedza 299 euros, inogona kutengwa kubva zvino kuGeekbuying, kunyangwe iri kutarisirwa kusvika kune akajairwa mapoinzi ekutengesa munguva pfupi. Kunyangwe kana kwete kukosha kwekudyara kudzivirira kunogara kuchidururwa, ndinoisiya mumaoko ako.
Roborock S7 kuzvidurura
Yakatumirwa pa: 15 de julio de 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 17 de julio de 2021
Multifunction nebhegi kana tangi
Nyore setup yakanaka dhizaini
Kubatana uye kugadzirisa
Ruzha runogona kuwandisa
Saizi yacho yakati rebei
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Musha » Roborock's Onyx Dump Station inoita kuti zvive nyore [Ongorora]
Vhidhiyo yekuongorora kamera ine 360 ​​kudzivirira
Kuongorora kweAUKEY LS02 smartwatch uye Aircore 15W charger